Paul's Letter to the Ephesians – 2hove
musha / Bhaibheri / mutsamba / Paul's Letter to the Ephesians
1:1 Paul, mupostori waJesu Kristu kubudikidza nechido chaMwari, to all the saints who are at Ephesus and to the faithful in Christ Jesus.
1:3 Ngaarumbidzwe Mwari naBaba vaIshe wedu Jesu Kristu, uyo akatikomborera nezvikomborero zvose zvomudzimu munzvimbo dzokudenga, muna Kristu,
1:4 sezvo akasarudza isu maari nyika isati yavambwa, kuti tive vatsvene uye tsvinda pamberi pake, parudo.
1:5 Iye akatitemera kare kuti tiitwe savana vake, kuburikidza naJesu Kristu, mukati make, maererano nechinangwa chake,
1:6 nokuti kurumbidzwa kwenyasha dzake, kwaakashandisa nesu chipo muMwanakomana wake anodiwa.
1:7 maari, watine dzikinuro maari neropa rake: kuregererwa kwezvivi maererano nokupfuma kwenyasha dzake,
1:8 riri superabundant matiri, nouchenjeri hwose uye nokunzwisisa.
1:9 Saka chaanoita azivise kwatiri chakavanzika chekuda kwake, kwaakashandisa kusimuka Kristu, nenzira nofadza kwaari,
1:10 muzera kuzara nguva, kuti vavandudze muna Kristu zvose iripo kuburikidza naye kudenga uye panyika.
1:11 maari, isuwo vanoda mugove wedu, vakanga varongerwa maererano zano Uyo anoita zvinhu zvose maererano nezano rake.
1:12 Saka ngative, kurumbidzo yekubwinya kwake, isu takavimba kare muna Kristu.
1:13 maari, nemiwo, mushure iwe wakanzwa uye vakatenda Shoko rechokwadi, rinova Gospel yokuponeswa kwenyu, vakaiswa mucherechedzo neMweya Mutsvene Promise.
1:14 Ndiye rubatso rwenhaka yedu, kusvikira pakuunganidza rokudzikinurwa, kurumbidzo yekubwinya kwake.
1:15 Nokuda kwaizvozvi, uye nekunzwa kwerutendo rwenyu muna Ishe Jesu, uye rudo rwenyu kuvatsvene vose,
1:16 Handina kurega kuvonga nokuda kwenyu, kukushevedzai muchibata muminyengetero yangu,
1:17 kuti Mwari waIshe wedu Jesu Kristu, Baba vokubwinya, anogona kupa mweya wouchenjeri uye kuzarurirwa kwauri, zivo pamusoro pake.
1:18 Dai meso emwoyo wenyu zvakavhenekerwa, kuti muzive kuti tariro yekudana kwake, uye fuma yekubwinya kwenhaka yake pavatsvene,
1:19 uye chinonyanya kukosha kwakaita simba rake kwatiri isu, hwatiri vanotenda maererano nebasa rake kunaka simba,
1:20 zvaakaita muna Kristu, nokumumutsa kubva kuvakafa uye kuvagadza iye kuruoko rwake rworudyi mudenga,
1:21 pamusoro ose kwavabati uye simba uye tsika uye nesimba, uye pamusoro zita ose kuti anopiwa, kwete panyika yazvino chete, asi kunyange munguva yemberi zera.
1:22 Uye akaita zvinhu zvose pasi petsoka dzake, uye akaita kuti musoro pamusoro yose Church,
1:23 ndiwo muviri wake uye inova kuzara kwaiye anoita zvose wose.
2:1 Uye maimbova makafa zvivi zvako uye zvigumbuso,
2:2 umo iwe wakafamba kare, maererano nezera ino, maererano muchinda simba kudenga ichi, Mweya unobata zvino vanakomana kusavimba.
2:3 Uye isuwo vose conversant mu izvi, kare, nokuchiva kwenyama yedu, vachiita maererano nokuda kwenyama uye maererano nendangariro dzedu pachedu. Uye saka taiva, pachisikirwo, vanakomana hasha, kunyange kufanana nevamwe.
2:4 asi zvakadaro, Mwari, uyo ane ngoni, nokuda kwake rudo kwazvo rukuru rwaakatida narwo,
2:5 kunyange patakanga takafa zvedu, akatipa enlivened pamwe muna Kristu, uyo nyasha makaponeswa.
2:6 Uye iye akatimutsa pamwe chete, uye iye akatibereka kugara pasi pamwe kumatenga, muna Kristu Jesu,
2:7 saka kuti kuratidza, mumazera nokukurumidza kusvika, fuma zhinji kwenyasha dzake, nokuda kwokunaka kwake kwatiri muna Kristu Jesu.
2:8 Nekuti nenyasha, makaponeswa nokutenda. Uye izvi hazvibvi kwamuri, nokuti chipo chaMwari.
2:9 Uye izvi hazvibvi pamabasa, zvekuti hapana ndirumbidze.
2:10 Nokuti isu tiri ramaoko ake, rakasikwa muna Kristu Jesu kuti tiite mabasa akanaka ayo Mwari akagadzirira uye yatinofanira kufamba.
2:11 Nokuda kwaizvozvi, be mindful that, kare, you were Gentiles in the flesh, and that you were called uncircumcised by those who are called circumcised in the flesh, something done by man,
2:12 uye kuti imi makanga, munguva iyoyo, pasina Kristu, kuva vatorwa kuti mararamiro vaIsraeri, kuva vashanyi mutestamende, musina tariro yechipikirwa, uye pasina Mwari munyika ino.
2:13 asi ikozvino, muna Kristu Jesu, iwe, vakanga kare kure kure, kare, makaswededzwa pedyo kubudikidza neropa raKristu.
2:14 Nokuti ndiye rugare rwedu. Akaita vaviri mumwe, kubudikidza Kuparadzwa ari zvenguva rusvingo kuparadzana, yokushorwa, nenyama yake,
2:15 nokuisa mutemo wemirairo kupfurikidza nechirevo, kuti kubatana izvi zviviri, mukati make, kupinda mumwe murume mutsva, rugare
2:16 uye achiyananisa zvose Mwari, mumuviri mumwe, nemuchinjikwa, achiparadza kupikiswa izvi pachake.
2:17 Uye pavakangosvika, iye evhangeri rugare kwamuri imi makanga muri kure, uye rugare kune vaya vaiva pedyo.
2:18 For naye, isu tose tine mapindiro, muMweya mumwe, kuna Baba.
2:19 ikozvino, saka, hamuchisiri Vashanyi uye vatsva. pachinzvimbo, imi vagari vatsvene muimba yaMwari,
2:20 wakati yakavakwa pamusoro penheyo kwevaApostora uye nevaprofita, Jesu Kristu pachake ave mukuru repakona.
2:21 maari, zvose kuti rave yakatumidzwa azviveza pamwe, wakasimuka ive temberi tsvene muna She.
2:22 maari, nemiwo dzakavakwa pamwe chete kuti muve ugaro hwaMwari muMweya.
3:1 By reason of this grace, ini, Paul, am a prisoner of Jesus Christ, for the sake of you Gentiles.
3:2 Now zvirokwazvo, makanzwa eMweya nyasha dzaMwari, unopiwa kwandiri pakati penyu:
3:3 kuti, achishandisa nokuzarurirwa, chakavanzika wakaziviswa kwandiri, sezvandakachengeta zvakanyorwa pamusoro mune mazwi mashoma.
3:4 asi, by reading this closely, you might be able to understand my prudence in the mystery of Christ.
3:5 Panedzimwe, ichi chaiva isingazivikanwi vanakomana vavanhu, sezvazvakanyorwa chozarurirwa kuvaapositori vatsvene, nevaporofita neMweya,
3:6 saka kuti vaHedheni vaizonzwirwa mushandirapamwe venhaka, uye muviri chete, uye vamwe pamwe chete, nechipikirwa chake muna Kristu Jesu, kuburikidza Gospel.
3:7 Of Gospel ichi, I have been made a minister, according to the gift of the grace of God, which has been given to me by means of the operation of his virtue.
3:13 Nokuda kwaizvozvi, I ask you not to be weakened by my tribulations on your behalf; for this is your glory.
3:17 so that Christ may live in your hearts through a faith rooted in, and founded on, mutsa.
3:21 to him be glory, in the Church and in Christ Jesus, throughout every generation, nokusingaperi. Amen.
4:1 uye saka, ari musungwa munaShe, Ndinokumbira kuti mufambe nenzira yakakodzera inova iyo iwe makadanirwa:
4:2 nekuzvininipisa kose nevunyoro, nekutsungirira, kutsigira mumwe parudo.
4:3 Mwoyo kuchengetedza hweMweya mukati zvisungo runyararo.
4:4 Mumwe muviri uye noMweya mumwe: kuti ichi iwe makadanirwa netariro imwe yokudanwa kwenyu:
4:5 Ishe mumwe, kutenda chimwe, rubhabhatidzo rumwe,
4:6 Mwari mumwe uye Baba vavose, ari pamusoro pezvose, uye kuburikidza zvose, uye isu tose.
4:8 Nokuda kwaizvozvi, anoti: “Ascending on high, he took captivity itself captive; he gave gifts to men.”
4:15 pachinzvimbo, acting according to truth in charity, we should increase in everything, in him who is the head, Christ himself.
4:16 For maari, the whole body is joined closely together, by every underlying joint, through the function allotted to each part, bringing improvement to the body, toward its edification in charity.
4:17 uye saka, Ndinotaura izvi, uye ndinopupura muna Ishe: kuti kubva zvino unofanira kufamba, kwete vahedheni vanofamba, mukushaya maturo kwefungwa yavo,
4:20 Asi ichi hachisi zvawakadzidza muna Kristu.
4:21 For zvirokwazvo, wateerera kwaari, uye imi anyeverwa maari, maererano nechokwadi chiri muna Jesu:
4:22 kuisa parutivi yapfuura maitiro enyu, aimbova murume, uyo yakakanganiswa, achishandisa chido, kusvikira kukanganisa,
4:23 uye saka muvandudzwe mumweya wefungwa yenyu,
4:24 uye saka mukafuka mutsva, ani, maererano naMwari, wakasikwa nokururamisira uye utsvene chokwadi.
4:25 Nokuda kwaizvozvi, setting aside lying, speak the truth, mumwe nomumwe kunowokwake. For we are all part of one another.
4:32 Uye kuva nomutsa uye tsitsi kune mumwe nomumwe, nokukanganwirana, sezvo Mwari akukanganwira muna Kristu.
5:1 saka, sezvo vanakomana vakawanda vanodiwa, kuva vatevedzeri vaMwari.
5:2 Uye fambai murudo, sezvo Kristu akatida uye akazvipa nokuda kwedu, chive chipiriso choupfu uye sechibayiro kuna Mwari, ane munhuwi kutapira.
5:3 Asi ngazvirege kutongova mhando ufeve, kana kumwedzi, kana rapacity zvikuru sezvo ngaritumidzwe pakati penyu, sezvo akakodzera vatsvene,
5:4 kana kunaka, kana benzi, kana zvisina hurukuro, nokuti izvi pasina chinangwa; asi pachinzvimbo, vongai.
5:5 Nekuti munoziva uye kunzwisisa izvi: hakuna munhu ari chifeve, kana ruchiva, kana makororo (nokuti izvi muri mhando yebasa kuzvifananidzo) akabata nhaka muumambo hwaKristu nehwaMwari.
5:6 Ngaparege kuva nomunhu anokunyengedzai namashoko asina maturo. Nekuti nemhaka yezvinhu izvi, hasha dzaMwari akatumirwa pamusoro pavanakomana kwokusatenda.
5:7 saka, usaridza kuva mugovane navo.
5:8 Nokuti imi makanga rima, kare, asi ikozvino muri chiedza, muna Ishe. Naizvozvo, famba sezvo vanakomana vechiedza.
5:11 uye saka, have no fellowship with the unfruitful works of darkness, asi pachinzvimbo, refute them.
5:14 Nokuda kwaizvozvi, zvinonzi: “You who are sleeping: awaken, and rise up from the dead, and so shall the Christ enlighten you.”
5:15 uye saka, hama, see to it that you walk cautiously, not like the foolish,
5:17 Nechikonzero ichi, do not choose to be imprudent. pachinzvimbo, understand what is the will of God.
5:18 And do not choose to be inebriated by wine, for this is self-indulgence. pachinzvimbo, be filled with the Holy Spirit,
5:21 Muzviise pasi pomumwe nomumwe muchitya Kristu.
5:22 Vakadzi vanofanira kuzviisa pasi pavarume vavo, sezvo Ishe.
5:23 Nokuti murume musoro womukadzi, sezvo Kristu ndiye musoro weChechi. Ndiye muponesi muviri wake.
5:24 saka, sezvo kereke ichizviisa pasi paKristu, saizvozvowo vakadzi vanofanira kuzviisa pasi pavarume vavo pazvinhu zvose.
5:25 varume, idai vakadzi venyu, sezvo Kristu akadawo Church uye akazvipa nokuda kwake,
5:26 kuti aitsvenese naye, kugeza yake yakachena nemvura uye Shoko upenyu,
5:27 kuti apisire kumuwana amene se Church ine mbiri, vasina chinhu gwapa kana kuunyana kana chipi zvacho, kuti aizova vatsvene uye tsvinda.
5:28 saka, wo, varume vanofanira kuda vakadzi vavo semiviri yavo. Uyo anoda mukadzi wake anozvida iye pachake.
5:29 Nokuti hakuna munhu wakatongovenga nyama yake, asi pachinzvimbo iye zvinogara uye anoitarisira, sezvo Kristu anoita kuti Church.
5:30 Nokuti isu tiri chikamu chomuviri wake, nyama yake uye mapfupa ake.
5:31 "Nokuda kwechikonzero ichi, murume achasiya shure baba vake naamai, uye anofanira kunamatira wake; uye vaviri vachava nyama imwe. "
5:32 Uyu reMinamato yeChirairo huru. Uye ndiri kutaura Kristu uye muKereke.
5:33 Asi zvechokwadi, mumwe nomumwe wenyu anofanira kuda mukadzi wake sezvaanozvida iye. Uye mudzimai anofanira kutya murume.
6:1 Children, teererai vabereki venyu muna Ishe, nokuti ichi inongova.
6:2 Kudza baba vako namai vako. Uyu ndiwo murayiro wokutanga une chipikirwa:
6:3 kuti zvive zvakanaka newe, uye kuitira kuti muve noupenyu hurefu panyika.
6:4 Uye newe, madzibaba, musanetsa vana venyu hasha, asi ovadzidzisa pamwe mukuranga uye kururamiswa kwaIshe.
6:5 vashumiri, teererai namadzishe enyu panyama, nokutya nokudedera, ari nyore mwoyo wako, sokuna Kristu.
6:6 Havashumiri chete kana vaona, sokunge kufadza vanhu, asi vave varanda vaKristu, vanoita kuda kwaMwari kubva pamoyo.
6:7 Shumirai nechido chakanaka, sezvo Ishe, uye kwete kuvanhu.
6:8 Nokuti imi munoziva kuti chero zvakanaka zvingaitwa nomumwe nomumwe achaita, chete achaita kubva Ishe, angava muranda kana akasununguka.
6:9 Uye newe, madzishe, kuita saizvozvo kwavari, yokutsaura vanotyisidzirwa, muchiziva kuti Ishe zvose iwe navo kudenga. Nokuti naye hapana kutsaura vakatarira munhu.
6:10 Achitaura zororo, hama, be strengthened in the Lord, by the power of his virtue.
6:13 Nokuda kwaizvozvi, take up the armor of God, so that you may be able to withstand the evil day and remain perfect in all things.
6:14 saka, stand firm, having been girded about your waist with truth, and having been clothed with the breastplate of justice,
6:16 In zvose, take up the shield of faith, with which you may be able to extinguish all the fiery darts of the most wicked one.
6:21 ikozvino, so that you also may know the things that concern me and what I am doing, Tychicus, a most beloved brother and a faithful minister in the Lord, will make known everything to you.